RASMI: Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha April ee horyaalka Premier League oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(England) 30 Abriil 2019. Waxaa la shaaciyey tababareyaasha ku tartami doona abaal-marinta macallinka ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishan maanta gabagabada ah ee April.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa goordhow shaaciyey afarta tababare ee tartami doona abaal-marinta macallinka bisha April ee horyaalka Premier League, waxaana ka soo muuqday tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp iyo hoggaamiyaha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola.
Labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ayaa guul gaaray dhammaan kulamadii ay ciyaareen bisha April, waxaana ay ku tartamayaan weli ku guuleysiga horyaalka Premier League, iyadoo kaliya ay u harsan yihiin min labo kulan.
Afartaan tababare ee ku tartami doona abaal-marinta macallinka bisha April ee horyaalka Premier League oo lagu shaaciyey website-ka rasmiga ah ee Premier League ayaa waxaa Klopp iyo Guardiola ku wehliya macallinka kooxda Fulham ee Scott Parker iyo tababaraha ​Wolverhampton Wanderers ee Nuno Espirito Santo.
Macallinka Man City ee Guardiola guulo ka soo hooyey kooxaha Manchester United, ​Tottenham Hotspur, ​Cardiff City, ​Crystal Palace iyo ​Burnley, waxaana ay ku dhow yihiin inay markoodii labaad oo xiriir ah ku guuleystaan horyaalka Premier League, waana ay qaadi doonaan haddii ay badiyaan labada kulan ee u haray.
Yeelkeede, kooxda Liverpool ayaa dhankeeda guulo wax ku ool ah gaartay bisha April horyaalka Premier League, waxaana ay ka adkaadeen Southampton, ​Chelsea, Cardiff City iyo ​Huddersfield Town, waxaana iminka ay hal dhibic ka dambeeyaa hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Citizens.
Nuno iyo Guardiola ayaa min hal jeer ku guuleystay abaal-marintan macallinka bisha ee Premier League xilli ciyaareedkan, halka Klopp labo goor uu ku guuleystay xilli ciyaareedkan oo magaciisa lagu qoray, waxaana tii ugu dambeysay uu hantay bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay.